Horror Psychedelic 'Ilay Reny tsy hita maso' izao
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Horohoro psychedelic 'ilay reny tsy hita' ankehitriny
Horohoro psychedelic 'ilay reny tsy hita' ankehitriny
by Waylon Jordan Oktobra 12, 2021 1,816 hevitra
Mandehana mitaingina an'ity horohoro / mpampientanentana psychedelic ity izao ao amin'ny VOD.
Freestyle Digital Media dia nahazo ny zon'ny VOD Amerikana Avaratra Ilay Reny tsy hita, sarimihetsika mampihoron-koditra psychedelic vaovao avy amin'ny mpanoratra sady talen'ny duo Jacob Gillman sy Matthew Diebler. Navoaka ireo mpaninjara teo aloha Trano demonia starring Zak Bagans, Ny Fahatsiarovana, Ilay zazavavy ao anaty boky, ary mihoatra. Ny Invisible Mother dia misy amin'ny Apple TV sy fitaovana streaming hafa ankehitriny.
Avy amin'ny sinopsis ofisialin'ny horonantsary: Ilay Reny tsy hita mitantara ny momba ny fitoraham-bato vehivavy lesbiana, Marcy, sy ny raibe sy renibeny, nampijalian'ny fanahy psychedelic tamin'ny rakitsary sary taloha. Niverina tany an-tranon'ny raibeny i Marcy ary nahita matoatoa matoatoa tsy hita maso sy fahitana psychedelic, ary i Marcy dia tsy maintsy nanala ny faran'ny zava-misy mba hamonjy ny fianakaviany.
Amin'ity fampandrenesana psychedelic feno loko ity, Marcy, rehefa nanary ireo fahitana ireo ho anisan'ny tsy fahalavorarian'ny renibeny, dia resin'ny horohoron-dreniny avy hatrany, voan'ny zava-misy sy matoatoa miteraka firaisana ara-nofo mitanjozotra mankao an-tranony.
Saingy rehefa mangalatra ny raibeny amin'ny alina ny orinasa mahafaty iray avy amin'ny sary Victoria, dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny miara-miasa amin'ny mpifanila trano amin'i Belle atsimo izy, ilay mpivarotra ahidratsy mitondra kamiao, renibeny marary, ary telefaona manaitaitra iray. psychic hiatrehana ny phantasm maizina alohan'ny hisamborana ny tratran'ny mahafaty ny olona fantany rehetra Ilay Reny tsy hita.
Ilay Reny tsy hita misy mpilalao toa an'i Kiersten Warren (Andron'ny fahaleovan-tena), Debra Wilson (Fihetseham-panoherana 4), Richard Riehle (Ny angano fitsanganana amin'ny maty Maria), Brinke Stevens (Fandripahana tamin'ny fety natory), ary Helen Slayton-Hughes (Parks-boly).
Ny horonantsary dia premieres amin'ny sehatra nomerika manomboka amin'ny Oktobra 12, 2021.
Ny Invisible Ineny dia azo alaina eto!
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba Ilay Reny tsy hita, araho izy ireo Facebook & Instagram.
Zahao ny tranofiara raha Ilay Reny tsy hita etsy ambany ary tadiavo ato ho ato amin'ny VOD nomerika avy amin'ny Freestyle Digital Media!